Duqa degmada Bandarbeyla oo soo dhaweeyey qorshaha horumarinta degmooyinka ee lagu soo gabagabeeyay dalka Jabuuti. – Radio Daljir
Duqa degmada Bandarbeyla oo soo dhaweeyey qorshaha horumarinta degmooyinka ee lagu soo gabagabeeyay dalka Jabuuti.
Banderbeyla,Dec 14 – Maamulka degmada Bandarbeyla ee gobolka Karkaar ayaa sheegay inuu siweyn uu u soo dhoweynayo shirkii horumarinta degmooyinka Puntland ee todobaadkan lagu soo gabagabeeyay dalka Jabuuti.
Gudoomiyaha degmada Bandarbeyla Saciid Aadan Cali oo isagu ka mid ahaa ka qaybgalayaashii kulanka lagu soo gabagabeeyay dalka Jabuuti oo isagoo ku sugan magaalada Boosaaso la hadlay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay qodobadii kasoo baxay shirka Jabuuti inuu yahay,mid wax wayn kusoo kordhin doono bulshooyinkii ku dhaqan degmooyinkii shirkan loo qabtay.
Gudoomiye Saciid Aadan Cali ayaa xusay shirka in dhaqaale loogu yaboohay degmooyinka Puntland oo ay saamaynta ku yeesheen kooxaha burcadbadeeda,waxaana uu intaasi raaciyay maamulkiisa degmada Banderbeyla inuu dhaqaalahaasi wax kaga qaban doono arimaha caafimaadka,waxbarashada,dhismayaasha dowladda,wadooyinka iyo ka wacyi galinta dadwaynaha ee dhinaca burcadbadeeda.
Hay’adda kaalmada Mareykanka ee US Aid ayaa todobaadkan kusoo gabagabeysay dalka Jabuuti shir looga hadlay horumarinta degmooyinka Baargaal,Xaafuun,Jariiban,Eyl iyo degmada Banderbeyla,waxaana kulankan uu qayb ka yahay mashruuc loogu magacdaray ITS oo ay maalgalinayso dowladda Mareykanka.